Milateriga Soomaaliya oo loo diiday in ay ilaaliyaan Xasan Sheekh oo Beladweyne ku sugan – Kalfadhi
Ciidamada Milateriga Soomaaliya ee ku sugan Gobolka Hiiraan ee Bartamaha Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu amray in aysan soo dhowayn karin islamarkaana ilaalin karin Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray Beladweyne.
Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ayaa Beladweyne waxaa ku soo dhoweeyay Maamulka Gobolka Hiiraan iyo qaybaha Bulshada, waxaana ilaalinaya Ciidamo gaar ah oo ka amar qaata Maamulka Gobolka Hiiraan kuwaas oo ilaalo u ah Guddoomiyaha Gobolka iyo Ciidamo kale oo la sheegay in ay yihiin Ciidamo beeleed ku sugan Beladweyne sida ay sheegayn Xubno katirsan Hirshabeelle.
Wasiirka Bay’ada iyo Horumarinta Reer Guuraayga ee Hirshabeelle Maxamed Xuseen ayaa Kalfadhi u sheegay in Ciidamada Milateriga Soomaaliya ee ku sugan Gobolka Hiiraan ay diidayn ka qayb qaadashada soo dhowaynta iyo sugitaanka amnigiisa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xildhibaano kale oo la socda. Xasan Sheekh oo hada Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ah ayaa la sheegay in ay ilaalinayaan Ciidamo katirsan kuwa Gobolka Hiiraan oo aan kamid ah Milateriga Qaranka.
“Waa diideyn Ciidamada Qaranka in ay ilaaliyaan Xasan Sheekh iyo Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya, ma ogin sababta balse waxaan aaminsanahay in la faray waayo Ciidanku waa la amraa ee isma amraan” ayuu Kalfadhi u sheegay Wasiirka Bay’ada Hirshabeelle. “Waan heysanaa Ciidan nagu filan oo ilaaliya amniga Madaxweynaha laakiin waxaa u baahan in lees weydiiyo sababta ay arintaan u dhacday” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wasiirka Bay’ada Hirshabeelle.
Dhinaca kale Xasan Sheekh ayaa saakay gurigiisa ku booqday Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo Xiriirkooda xumaa tan iyo dhismihii Maamulka Hirshabeelle. Qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku yiri “waxaan saakay gurigiisa ku booqday Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, Ugaaska waxaan kawada hadalnay danaha Soomaaliya guud ahaan iyo tan degaanka gaar ahaan“.
“Waxaan uga mahadcelinayaa soo dhawaynta iyo qaddarinta aan kala kulmay Ugaaska iyo Maamulka iyo guud ahaan dadweynaha reer Beladweyne” ayuu yiri Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud.
Maalmo ayaa la sheegay in ay halkaasi ku sugnaan doonaan Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed iyo mas’uuliyiin kale oo socdaalkooda ku wehliya.